सांसद ‘अपहरण’ को जाहेरी लिन प्रहरीले मानेन, महोत्तरी जान सुझाव
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताले लिएर गएको सांसद ‘अपहरण’ सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
परिसरको मुद्दा शाखाका डीएसपी कृष्ण चन्द र एसपी सोमेन्द्र सिंह राठोरले घटनास्थल महोत्तरीमै दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । मुद्दा दर्ता गर्न शाखाका प्रहरी अधिकारीले आनाकानी गरेपछि प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीसँग नेताहरुले छलफल गरेका थिए।
उनलेसमेत मु्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बाबुरामका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । अब किटानी जाहेरी नेपाली जनताकोमा दिने हो’, उनले भने, ‘बाँकी फैसला अब जनअदालतले गर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसहितका नेता आइतबार दिउँसो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका थिए ।
मुद्दा दर्ता गर्न अपहरित भएका भनिएका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवसमेत टेकु पुगेका थिए । वैशाख १० गते महोत्तरी पुगेर सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी खनालले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।
सोही प्रयासस्वरुप उनीहरुले सांसद यादवलाई अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएका थिए। समाजवादी पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसद यादवको अपहरण गरेको दाबी गरेका छन्।
महोत्तरीबाट अपहरणको शैलीमा काठमाडौंको नक्सालस्थित मेरियट होटलमा राखेपछि सांसद यादव डा. भट्टराई र नेता उपेन्द्र यादवको सम्पर्कमा पुगेका थिए।